Posted by A-bomb at 1:19 AM
အောင်နိုင်စောအမည်ရှိ စင်္ကာပူမှ ဧဝံဂေလိထမင်းမငတ်ဂါထာရွတ်လျှက်ရှိသော ခရစ်ရှန်တစ်ဦးသည် ကျွန်တော်A-Bombကို ထိပ်တိုက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝံ့သော သတ္တိမရှိလတ္တံ့။ ထို့ကြောင့် Cboxတွင် ပြန်ချေပခြင်းငှာမတတ်နိုင်ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တိုက်ခိုက်၊ ခရစ်ရှန်နတီကို မြှင့်တင်သည်ဟု သူယူဆသော ဘလော့ဂ်များ၏ လင့်ခ်များကိုသာ တွင်တွင်ကြော်ငြာလျှက်ရှိပေသည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်တော်သည် ခရစ်ရှန်များ၏ ဘိုင်ဘယ်လ်မှန်ကြောင်း ကြိုးစားသက်သေပြရှာသော ယုတ္တိကင်းမဲ့လှသည့် လုပ်ရပ်တစ်ခုကို မြင်ခဲ့ရ၏။ သွားရောက်ကြည့်ရှုကြပါကုန်။
ဤကိစ္စကား အကျဉ်းချုံးရသော် ခရစ်ရှန်ကျမ်းစာ ဓမ္မဟောင်းတွင်ပါသော လူ့ဘီလူးကြီးများ၏ ပေါင်ရိုးကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကို တူးဖော်ရရှိပါသည်ဟု ယုတ္တိတန်၏မတန်၏မစဉ်းစား။ စဉ်းစားနိုင်သော ဥာဏ်ရည်လည်းမရှိ။ ထို့ကြောင့်ပင် အမေရိကန် ခရစ်ရှန်ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒီများ၏ လှည့်ကွက်လှိမ့်လုံး(hoax)ကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ လာရောက်ပြသကြွားဝါ၏။ ဤကဲ့သို့ ဟာသရသမြောက်လှသော လှိမ့်လုံးများကို အကျွန်ုပ်အချိန်ကုန်ခံပြီး မဖြေရှင်းလို။ ဖြေရှင်းချေပထားသော ဆောင်းပါးများ၊ သုတေသနများ အဆင်သင့်ပင်ရှိ၏။ သွားရောက်လေ့လာဖတ်ရှုကြပါကုန်။ ခရစ်ရှန်လူလိမ်များ၏ လှည့်ကွက်များကို နားလည်သဘောပေါက်၍ ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ။
Posted by A-bomb at 10:03 AM
ခရစ်ရှန်လောကမှာ လိင်တူချစ်သူတွေဟာ အင်မတန်ကိုမှပေါများလှပါတယ်။ အခုခေတ်မှပဲ ဂေးခရစ်ရှန်တွေများလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ရေးပြခဲ့သလိုပဲ ယေရှု၊ ယောဟန်နဲ့ သူ့နောက်လိုက်တွေကိုယ်တိုင်က လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ခန့်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ ဂေးခရစ်ရှန်များဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုမမွေးခင် ဘီစီထောင်စုနှစ်၁စုကျော်ခန့်က လိင်တူချစ်သူခရစ်ရှန်တွေ ရှိခဲ့တဲ့အထောက်အထား ဘိုင်ဘယ်လ်မှာအခိုင်အမာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ဘာသာရေးနယ်ပယ်သာမက နယ်ပယ်အတော်များများမှာ မသိသူနည်းပါးလောက်တဲ့ ဘိုင်ဘယ်လ်လာ ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ် သမိုင်းမှာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့ အစ္စရေးလ်ဘုရင် ဒေးဗစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေးဗစ်ဘုရင်ကို ဘီစီ ၁၀၄၀နဲ့ ၉၇၀ကြားမှာ နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်။ ဘိုင်ဘယ်လ်လာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ဟာ အပြင်လောကမှာတစ်ကယ်ရှိခဲ့ပေမယ့် သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ဘိုင်ဘယ်လ်လာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီး ခွဲခြားလို့ရအောင် ဘိုင်ဘယ်လ်မှာပါတဲ့ အချက်အလက်တွေက မှားယွင်းနေပါတယ်။ အခုကျွန်တော်က ဘိုင်ဘယ်လ်လာ ဒေးဗစ်ဘုရင်အကြောင်းကို ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေးဗစ်ဘုရင်ကို အမေရိကန်ယုဒသန်ဘာသာပြန်တဲ့ မြန်မာဘိုင်ဘယ်လ်မှာ ဒါဝိမင်းလို့သုံးနှုံးထားပါတယ်။ ခရစ်ရှန်ဧဝံဂေလိကြီး ယုဒသန်ဟာ ဗမာပြည်ပဒေသရာဇ်ခေတ်မှာ သာသနာပြုဖို့ရောက်လာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပူးသတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရရင် ယုဒသန်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်တစ်ပါးအနေနဲ့ အမြင်မှားအောင် ဗမာလူမျိုးတွေကို လှည့်စားဖို့အတွက် အဝါရောင်သင်္ကန်းခြုံပြီးတော့ တရားဟောဖို့ပါကြိုးစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါင်းယောင်ဆောင်တဲ့ကျီးလိုပါပဲ။ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ သူဘာသာချင်းပူးသတ်ထားတဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကတော့ သူလိုရာဆွဲဘာသာပြန်ထားတဲ့ မြန်မာဘိုင်ဘယ်လ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကတ်သလစ်ဘိုင်ဘယ်လ်၊ ခေတ်သုံးဘိုင်ဘယ်လ်နဲ့ ယုဒသန်ဘိုင်ဘယ်လ်ဆိုပြီး ဗမာစကားနဲ့ဘိုင်ဘယ်လ်၃မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာ ယုဒသန်ဘိုင်ဘယ်လ်က ဖတ်ကြည့်ရင် ရယ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နာမည်အသံထွက်ပုံတွေ၊ ဝေါဟာရတွေနဲ့ သဒ္ဒါထားသိုမှုတွေက အင်မတန်မှ ဟာသရသမြောက်ပါတယ်။ ခရစ်ရှန်တွေကပြောကြပါတယ်။ ယုဒသန်က ဂရိနဲ့ဟီဘရူးစာတတ်လို့ သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားက အသံထွက်တွေအတိုင်း နာမည်တွေကိုရေးထားတာပါတဲ့။ အဲတော့ ကျွန်တော်ဘိုင်ဘယ်လ်ထဲမှာပါတဲ့နာမည်တွေကို ဟီဘရူး၊ ဂရိအသံထွက်တွေနဲ့စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အတော်များများဟာ ယုဒသန်ထွက်ဆိုတာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်အောင်၊ ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်ကို ကွဲလွဲနေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး၎မှာပါတဲ့ အာဒံရဲ့သားဦးနှစ်ယောက်အကြောင်းကို တစ်ချို့သိကြမှာပါ။ ကာဣနနဲ့ အာဗေလလို့ခေါ်ပါတယ်။ နာမည်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ဘာကိုသွားသတိပြုမိပါသလဲ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ? ပါဠိနာမည်တွေနဲ့တူမနေဘူးလား? ဟုတ်ပါတယ်။ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ ဗမာပြည်မှာ သာသနာပြုဖို့ရောက်လာတဲ့ အမေရိကန်ယုဒသန်ဟာ ဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်လို့ နာမည်တွေကို ပါဠိအသံထွက်နဲ့ဆင်အောင်ရေးပြီး ဘာသာချင်းပူးသတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပါဠိစကားဆိုတာ ရှေးအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကလာတာပါ။ ကုလားအသံထွက်နဲ့ ဆင်အောင်ရေးထားတဲ့ ကုလားနာမည်တွေပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်ဒီပို့စ်ဖတ်အပြီးမှာ ဟိုဘာချောညာချောဆိုလားမသိ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သူ့ဆီမှာရှိတဲ့ယုဒသန်ဘိုင်ဘယ်လ်ကို မီးရှိူ့ပစ်မှာမြင်ယောင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ သူ့ဘိုင်ဘယ်လ်ကို ကုလားစကားက အတော်လွှမ်းမိုးထားတာမဟုတ်လားဗျ။
အခုလည်း ကုလားနာမည်နဲ့ ဒါဝိမင်းတဖြစ်လည်း ဒေးဗစ်ဘုရင်ဟာ ဘယ်လိုမျိုး လိင်တူချင်းဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုတာ အကိုးအကားနဲ့ ဖော်ပြပါ့မယ်။
ထိုသို့လျှောက်ပြီးနောက်၊ ရှောလု၏သားယောနသန်စိတ်နှလုံးသည် ဒါဝိဒ်စိတ်နှလုံးနှင့် စွဲကပ်လျက်ရှိ၍ ဒါဝိဒ်ကိုကိုယ်နှင့်အမျှချစ်လေ၏။ (ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် ၁၈:၁)
ရှောလုဆိုတာ ဒေးဗစ်ဘုရင်မဖြစ်ခင်က ထီးနန်းစိုးစံခဲ့တဲ့ အစ္စရေးလ်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဒါဝိဟာ ရှောလုရဲ့အစေအပါးတစ်ယောက်မျှသာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိလိတ္တိလူတွေနဲ့ ဣသရေလ(အစ္စရေးလ်) လူတွေတိုက်တဲ့စစ်ပွဲမှာ တစ်ဖက်က ဂေါလျတ်အမည်ရှိတဲ့ လူထွားကြီးရဲ့ခေါင်းကို ဒါဝိလေးကဖြတ်ပြီး ဘုရင်ကြီးရှောလုကိုဆက်သပါတယ်။ (စကားချပ်: တိုက်ပွဲကအင်မတန်မှယုတ္တိရှိလှပါတယ်။ စစ်သူရဲကောင်းကြီးကို လောက်လေးခွနဲ့လောက်စာလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ အသေသတ်ခဲ့တဲ့ဒါဝိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား) အဲဒီမှာပဲ ငယ်ရွယ်ပေမယ့် ရဲရင့်သန်မာလှတဲ့ဒါဝိလေးကို ယောနသန်ဆိုတဲ့ ရှောလုရဲ့သားဟာ ဖလန်းဖလန်းတွေထပြီးတော့ မြင်မြင်ချင်းပဲချစ်မိပါတော့တယ်ခင်ဗျ။
ယောနသန်သည်လည်း၊ ဒါဝိဒ်ကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်သောကြောင့် သူနှင့်အတူ မိဿဟာယဖွဲ့ပြီးလျှင်၊ မိမိဝတ်သောဝတ်လုံကိုချွတ်၍ မိမိအဝတ်တန်ဆာများနှင့်ထား၊ လေး၊ ခါးစည်းတို့ကိုပင် ဒါဝိဒ်အား ပေးလေ၏။ (ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် ၁၈:၃-၄)
အဲဒီလိုနဲ့ ချစ်မိသွားတဲ့ယောနသန်ဟာ ပထမဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့ ခင်အောင်အရင်ပေါင်းပါတယ်။ ခင်မင်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူတဲ့ လိင်တူချစ်သူယောနသန်ဟာ ဒါဝိရှေ့မှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် အဝတ်အစားများချွတ်ပြပြီးတော့ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မိမိဝတ်သောဝတ်လုံကိုချွတ်၍လို့ဆိုရာမှာ he stripped himself လို့သုံးပါတယ်။ အဲဒီတော့ အပေါ်ရုံအဝတ်အစားတစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကိုယ်လုံးကိုချွတ်(strip)လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုချွတ်ပြပြီးနောက်တော့ သူဘာဆက်လုပ်လဲ၊ ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ပါခင်ဗျာ။
သားတော်ယောနသန်သည် ဒါဝိဒ်ကိုအလွန်ချစ်၍၊ ငါ့အဘရှောလုသည် သင့်ကိုသတ်ခြင်းငှာ ရှာကြံ၏။ သို့ဖြစ်၍ နံနက်တိုင်အောင် ကိုယ်ကိုသတိပြုသဖြင့် ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်၌ ပုန်းရှောင်၍နေပါလော့။ (ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် ၁၉:၂)
အဲဒီနောက်မှာတော့ ရှောလုဟာ ဒါဝိကိုသတ်ဖို့ သူ့သားယောနသန်ကို တာဝန်ပေးပေမယ့် ချစ်မိနေတဲ့ယောနသန်ဟာ ဒါဝိကို သူ့ခမည်းတော်ရဲ့အကြံအစည်ကိုပြောပြပြီး လုံခြုံရာအရပ်မှာ ပုန်းခိုင်းပါတော့တယ်။
ထိုအခါ ရှောလုသည်ယောနသန်ကို အမျက်ထွက် ၍၊ မြောက်မ ထားသော မိန်းမ၏သား၊ သင်သည်ကိုယ်တိုင်အရှက်ကွဲသည်တိုင်အောင်၎င်း၊ သင့်အမိအဝတ်ကျွတ်၍ အရှက်ကွဲသည် တိုင်အောင်၎င်း၊ ယေရှဲ၏သားဘက်၌ နေသည်ကိုငါမသိသလော။ (ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် ၂၀:၃၀)
အမေကောသားပါမရှောင် ဒွိလိင်သုံးဆောင်တဲ့ ကြာကူလီဒေးဗစ်ကြောင့် ရှောလုဘုရင်ကြီးက ဒေါသအမျက် ချောင်းချောင်းထွက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှဲဆိုတာ ဒေးဗစ်ရဲ့အဖေဖြစ်ပါတယ်။ ယုဒသန်ပြောတဲ့ မြောက်မဆိုတာ ကျွန်တော်ဘာမှန်းမသိပါခင်ဗျား။ မြောက်မရှိရင် တောင်မလည်းရှိရပါမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ် - ဤကားစကားချပ်။
ရှောလုသည် ယောနသန်ကိုမှန်စေခြင်းငှာ လှံတိုကိုလက်လွှတ်၍ ထိုးလေ၏။ (ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် ၂၀:၃၁)
ကိုယ့်သားကလိင်တူချစ်သူဖြစ်မှန်းသိတဲ့အခါမှာ သတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ရှောလုဟာ ကိုယ့်သားသမီးကိုသတ်ဖို့ဝန်မလေးတဲ့ လိင်တူချစ်သူမုန်းတဲ့ ခရစ်ရှန်မိဘတွေရဲ့ ပိုင်အိုနီးယားဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်ရှန်မိဘများမှပေါက်ဖွားလာသော ခရစ်ရှန်လိင်တူချစ်သူများကို တွေ့ရှိပါက အထူးပင်စောင့်ရှောက်ဂရုစိုက်ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
လူကလေးသွား သောနောက်၊ ဒါဝိဒ်သည်တောင်မျက်နှာအရပ်ကထ၍ မြေပေါ်မှာပြပ်ဝပ်လျက် သုံးကြိမ်တိုင်အောင် ဦးညွှတ်ပြီးလျှင်၊ သူတို‹သည်တယောက်ကိုတယောက်နမ်းလျက် မျက်ရည်ကျလျက်၊ ဒါဝိဒ်သည်သာ၍ပြုသည် တိုင်အောင် ပြုကြ၏။ (ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် ၂၀:၄၁)
ဒါဝိနဲ့ယောနသန်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်အနမ်း homo kiss ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အခုပြောပြခဲ့သမျှကတော့ ဒါဝိနဲ့ယောနသန်တို့ရဲ့ ဟိုမိုအချစ် ဒရာမာဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပရိသတ်က ဘယ်လိုများဇာတ်သိမ်းချင်ပါသလဲ?
ငါ့ညီ ယောနသန်၊ သင့်ကြောင့် ငါညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏။ သင်သည်ငါ့မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်၍၊ ငါ့ကိုချစ်သောမေတ္တာသည် အံ့သြဘွယ်သောမေတ္တာ၊ မိန်းမကိုချစ်တတ်သော မေတ္တာထက်သာ၍၊ အားကြီးသောမေတ္တာဖြစ်၏။ (ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် ၁:၂၆)
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာတော့ ဗီလိန်ရှောလု ဒါဝိရဲ့လက်ချက်ကြောင့်သေပါတယ်။ ဒါဝိလည်းအစ္စရေးလ်ဘုရင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒရာမာကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း မင်းသမီးမင်းသားတစ်ယောက်ယောက် သေရပါတယ်။ ဒီမှာတော့ မင်းသားနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်သေတယ်ပေါ့။ ယောနသန်သေပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဒါဝိကလူကြားထဲငိုပါလေရော။ လူကြားထဲမှာမို့လို့ ငါ့ညီလို့ခေါ်တာပါ။ အဲဒီမှာ မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်၍ဆိုတဲ့စကားလုံး အင်္ဂလိပ်ဘိုင်ဘယ်လ်မှာကော ဟီဘရူးဘိုင်ဘယ်လ်မှာကော တစ်လုံးမှမပါပါ။ မျက်နှာဖြူယုဒသန် လုပ်ကြံဖြည့်စွက်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ မယုံပါကတိုက်ကြည့်ကြပါကုန်။ ယောနသန်ရဲ့ လိင်တူချင်းထားတဲ့ ချစ်စိတ်က ဘယ်လောက်တောင်မှထန်သလည်းဆိုရင်ဖြင့် ဒါဝိက သူ့ငိုချင်းထဲမှာကို ဝန်ခံထားပါတယ်။ မိန်းမတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်ထက်ကို အားကြီးပါတယ်တဲ့။ ဒါဝိမင်းဆိုတာ ကြာကူလီဆရာ တဏှာဂိုဏ်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက မိန်းမတွေအများကြီးကို စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်လို့ ယောနသန်ရဲ့ သူ့အပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာကို ယှဉ်ပြောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဇာတ်လမ်းလေးသာ ယောက်ျားတစ်ဦးနဲ့ မိန်းမတစ်ဦးအကြားဖြစ်တဲ့ အချစ်၊ ဒရာမာ ဇာတ်ကြမ်းလေးသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တကယ်ကိုခံစားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုင်ဘယ်လ်ဖတ်တဲ့ ခရစ်ရှန်တွေအနေနဲ့ကတော့ ဒီလိုမျိုးဟိုမိုဇာတ်လမ်းတွေက မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ ဓမ္မသစ်မှာ ယေရှုနဲ့ယောဟန်၊ ဓမ္မဟောင်းမှာ ဒါဝိနဲ့ယောနသန်တို့ရဲ့ လိင်တူချစ်သူအတွဲများနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ဘိုင်ဘယ်လ်ဟာ ယနေ့ခရစ်ရှန်လောကရဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေကိုထင်ဟပ်နေတယ်လို့ပြောရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted by A-bomb at 3:31 PM
ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲ ဆာရ်အယ်လ်တန်ဂျွန်(Sir Elton John) ပြောတဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ပရိတ်သတ်ကြီးအမှတ်ရကောင်းရမှာပါ။ "ယေရှုဟာဂေးတစ်ယောက်" ဆိုပြီးပြောခဲ့တာကိုပေါ့။ အယ်လ်တန်ဂျွန်က အဲလိုကွန်မန့်ပေးခဲ့တုန်းက ကျွန်တော်တော့မအံ့သြမိပါဘူး။ တကယ်လည်းယေရှုဟာ လိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ဘိုင်ဘယ်လ်ကသက်သေခံနေလို့ပါပဲ။ ခရစ်ရှန်တွေက ဘုရားလုပ်ကိုးကွယ်နေတဲ့ ယေရှုကိုယ်တိုင်က လိင်တူချစ်သူဖြစ်နေမှတော့ ဂေးသင်းအုပ်တွေ၊ လိင်တူလက်ထပ်မှုတွေ အသင်းတော်တွေမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လက်ခံနေတာ မဆန်းဘူးပေါ့။ အယ်လ်တန်ဂျွန်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ခရစ်ရှန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ယောက်ျားအချင်းချင်းလက်ထပ်ထားတဲ့ ဂေးတစ်ယောက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ ဂေးလို့သုံးနှုံးတာထက် လိင်တူချစ်သူလို့ပြောင်းပြီး သုံးနှုံးချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဂေးလို့ခေါ်တာဟာ အသုံးများတဲ့ စကားရိုင်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ အဲတော့ ယေရှုဘယ်လိုမျိုး ယောက်ျားအချင်းချင်းသာယာခဲ့လည်းဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်။
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာ ယောဟန်ကသူ့ကိုယ်သူ ယေရှုချစ်တော်မူသော တပည့်တော်လို့ မကြာမကြာသုံးနှုံးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒါဆိုမေးစရာဖြစ်လာပြီပေါ့။ ဘယ်လိုချစ်တာလဲ?
ယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်သည် ရင်ခွင်တော်နားမှာ လျောင်းသဖြင့်၊ ၂၄အဘယ်သူကိုရည်ဆောင်၍ မိန့်တော်မူသနည်းဟု မေးစေခြင်းငှါ၊ ရှိမုန်ပေတရုသည် ထိုတပည့်တော်ကိုအမှတ်ပေး၏။ ၂၅ထိုတပည့်တော်သည် ယေရှု၏ရင်တော်ကိုမှီ၍ လျောင်းနေလျက်၊ သခင်၊ အဘယ်သူနည်းဟုလျှောက်၏။ (ယော ၁၃:၂၃-၂၅)
ယေရှုချစ်တော်မူ၍ အထက်က ညစာစားသောအခါ ရင်တော်ကိုမှီ၍လျောင်းလျက်၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်
ကိုအပ်နှံသောသူကား အဘယ်သူနည်းဟု မေးသောတပည့်တော်သည်လည်း နောက်တော်သို့ လိုက်သည်ကို ပေတရုသည် လှည့်၍မြင်လျှင်၊ (ယောဟန် ၂၁:၂၀)
လီယိုနာဒိုဒဗင်ချီရဲ့ နောက်ဆုံးညစာအမည်ရှိတဲ့ ပန်းချီကားကိုလူတိုင်းသိကြမှာပေါ့။ အဲဒီပန်းချီကားက ယေရှုသူ့တပည့်တွေနဲ့ ညစာစားအရက်အတူတူသောက် မူးရူးပျော်ပါးခဲ့တဲ့အကြောင်း ဘိုင်ဘယ်လ်လာဇာတ်လမ်းကို စိတ်ကူးပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (ယေရှုဟာ ပါတီမက်သူ အသောက်ကြူးသူလို့လည်း ဘိုင်ဘယ်လ်အားဖြင့်သိရပါတယ်)။ လိင်တူချစ်သူယေရှုနဲ့ယောဟန်တို့က ဘေးချင်းကပ်ထိုင်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ ယေရှုရဲ့အချစ်တော်ယောဟန်က ယေရှုရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ခိုနားပြီးတော့ သခင်ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်သူလဲလို့ဆိုပြီး အရက်မူးတဲ့အသံနဲ့မေးနေတဲ့ပုံကိုမျက်စိထဲမှန်းကြည့်ကြပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးယောက်ျားရင့်မကြီးတစ်ယောက်က လူအနည်းဆုံး၁၃ယောက်ရှိနေတဲ့ စားပွဲသောက်ပွဲမှာ ယောက်ျားအချင်းချင်းရင်ခွင်ထဲကို တိုးဝင်လဲလျောင်းတာဟာ straight ယောက်ျားစစ်စစ်တွေရဲ့အပြုအမူမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါလိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ချစ်တင်းနှောမှုတစ်မျိုးပါ။
ယေရှုနှင့် သူ၏အချစ်တော် ယောဟန်
ပိတ်​ပိုင်း​လွှာ​တစ်​ခု​ကို​သာ​ဝတ်​ထား​သည့်​လူ​ငယ်​လူ​ရွယ်​တစ်​ယောက်​သည် ကိုယ်​တော်​၏​နောက်​တော်​က​လိုက်​လာ​၏။ လူ​အ​ချို့​တို့​သည်​သူ့​ကို​ဖမ်း​ဆီး​မည်​ပြု​ကြ​သော​အ​ခါ၊-သူ​သည်​ပိတ်​ပိုင်း​လွှာ​ကို​စွန့်၍​အ​ဝတ်​မ​ပါ​ဘဲ​ထွက်​ပြေး​လေ​၏။ (မာ ၁၄:၅၁-၅၂)
ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တွေထဲက လိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ ယေရှုရဲ့အမိန့်ကိုနာခံပြီး အဝတ်အစားတွေကိုချွတ်ရောင်း ဓားဝယ်လိုက်ရလို့ပိတ်စတစ်ပိုင်းပဲပတ်ထားနိုင်ပုံရပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီအဝတ်ကျွတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ လူငယ်ရဲ့အနောက်ပိုင်းကို ယေရှုကမျက်စိအစာကျွေးနေမှာ အသေအချာပါပဲခင်ဗျာ။
ယေရှုဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်က လိင်တူချင်းနှစ်သက်ရုံမကပါဘူး၊ သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုလည်း လိင်တူချစ်သူဖြစ်အောင် ဆုံးမပါတယ်။
၁၂လူအချို့တို့သည် အမိဝမ်းတွင်းကပင် မိန်းမလျှာဖြစ်ကြ၏။ အချို့တို့သည် သူတပါးဆုံးမ၍ မိန်းမလျှာဖြစ်ကြ၏။ အချို့တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အဘို့အလို့ငှါ မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမ၍ မိန်းမလျှာဖြစ်ကြ၏။ ထိုစကားကို ခံယူ နိုင်သောသူသည် ခံယူစေဟု မိန့်တော်မူ၏။ (မဿဲ ၁၉:၁၂)
မိန်းမလျှာဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ဟာဖြင့် မြန်မာဝေါဟာရမှာ ပိုမိုယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်တော့ အခြောက်၊ ဂန်ဒူး၊ ဂေး၊ ဟိုမို၊ ဂျီပုန်း၊ ဂျော်ရကီး၊ ဂျယ် စတဲ့ ဘန်းစကား နေ့စဉ်သုံးစကားတွေနဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အခုဆောင်းပါးရေးရတာဟာ လိင်တူချစ်သူတွေကိုမုန်းစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပါပါဘူး။ ခရစ်ရှန်တွေဟာ သမိုင်းအစဉ်အဆက်မှာ ဂေးတွေ လိင်တူချစ်သူတွေကို နှိပ်ကွပ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တာကို သိမှာပါ။ ခရစ်ရှန်တွေဟာဖြင့် ကြောင်သူတော်တွေဖြစ်တဲ့အားလျှော်စွာ လိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်ကို ဘုရားလုပ်ကိုးကွယ်နေပြီး လိင်တူချစ်သူတွေကို ရွံရှာမုန်းတီးလျှက်ရှိပါတယ်။ အမှန်တကယ် ပထမဦးစားပေးသတ်ရမည်မှာ လိင်တူချစ်သူယေရှုဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted by A-bomb at 12:45 PM
ပြောရိုးပြောစဉ်မို့ နှုတ်က အလွယ်တကူ ပြောလေ့ရှိတဲ့ မြန်မာစကားတွေထဲမှာ မနှစ်သက်နိုင်တဲ့ စကားတချို့ ရှိတယ်။ တချို့စကားတွေဆိုရင် ဘယ်ခေတ်မှာ ဘယ်သူကစခဲ့တယ် မသိဘူး။ တော်တော် ယုတ္တိမတန်၊ မမှန်ကန်တာ တွေ့ရတယ်။
အဲဒီလိုစကားတွေထဲက မနှစ်သက်နိုင်ဆုံး စကားတစ်ခုကတော့ ''ဘုရားတောင် အမှီရှိမှပွင့်တယ်'' ဆိုတဲ့ စကားဖြစ်တယ်။ အဆူဆူသော ဘုရားများဟာ သစ်ပင်တစ်ပင်ပင်ရဲ့ အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ စံပါယ်တော်မူရင်း ဘုရားအဖြစ်ကို ရောက် ရှိခဲ့ကြတာကို အကြောင်းပြုပြီး ပြောကြဆိုကြတာ ဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ ဗောဓိညောင်ပင်အောက်မှာ ဘုရားအဖြစ် ရောက်ခဲ့တာမှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗောဓိညောင်ပင်ဆိုတဲ့ အမှီကြောင့် ဘုရားအဖြစ်ကို ရရှိခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာ တစ်သိန်း ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ အထုံပါရမီနဲ့ အတိုင်းအဆမရှိ ကြီးမားလှတဲ့ ဉာဏ်ပညာကြောင့် ဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်ကို ရောက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆူဆူသော ဘုရားများဟာ သစ်ပင်တစ်ပင်ပင်အောက်မှာ ဘုရားအဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ကြတာက အခြေအနေအရ ဖြစ်ရတဲ့ သဘောပါ။ ဘုရားအလောင်းအဆက်ဆက်တို့ဟာ လောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကို စွန့်ပြီး တောရပ်မှာ လှည့်လှည်သီတင်းသုံး ရင်း တရားစစ်တရားမှန်ကို ရှာဖွေကြပါတယ်။ ကျောင်းသင်ခန်း ဆောက်တည်နေလေ့ မရှိပါဘူး။ အရိပ်အာဝါသကောင်းရာ သစ်ပင်ဝါးပင်တွေအောက်မှာ အလျဉ်းသင့်သလို သီတင်းသုံးပြီး ကျင့်ကြံအားထုတ်နေကြတာ ဖြစ်တယ်။ နေရေးစား ရေးကိစ္စများအတွက် အချိန်ကုန်မခံပါဘူး။ ရသမျှအချိန်တိုင်း သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော် ရရှိရေးအတွက်သာ အားထုတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သစ်ပင်ကောင်းတစ်ပင်ရဲ့ အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ရင်း ဘုရားအဖြစ်ကို ရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့် ဘုရားနဲ့သစ်ပင်ကို တွဲပြီးမြင်နေရတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စကားအဖြစ် ပြောနေကြသလို ''အမှီရှိမှပွင့်တယ်'' ဆိုတာ မမှန်ပါဘူး။ ဒီမမှန်တဲ့ စကားကို နှုတ်က ခပ်ပေါ့ပေါ့နဲ့ အလွယ်တကူ ပြောနေကြလေတော့ လူတွေကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်ဖို့ အားမပေးတဲ့သဘော သက်ရောက်သွားခဲ့ရတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာက အားကိုးမှီခိုရာ ကယ်တင်ရှင် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ လူတစ်ယောက် ကောင်းရာမွန်ရာရောက်အောင် ဘယ်သူကမှ ပို့မပေးနိုင်သလို ငရဲရောက်အောင်လည်း ဘယ်သူကမှ တွန်းချတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အရာမဆို ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပါပဲ။
'ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေး' အခြေအနေ ဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ 'ကယ်တင်ရှင်' စိတ်ဓာတ် (Savior Complex) တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓရဲ့ အလိုတော်က ဘာမဆို ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရပါတယ်။ ကျင့်ကြံအားထုတ်လုပ်သူ မှန်သမျှ ဘယ်သူမဆို ဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်ကိုတောင် ရနိုင်ပါတယ်။ မိဘကျေးဇူး ဆပ်ချင်လွန်းလို့ဆိုပြီး မိဘကို နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် လုပ်မပေးနိုင်သလို၊ သားသမီးကိုချစ်လွန်းလို့ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်မှာ နတ်သမီးလေးတွေ တစ်ဖက်ငါးရာနဲ့ စံစားနိုင်အောင် ဘယ်မိဘကမှ လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကျင့်၊ ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှ ရနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ အားကိုးလို့ မရဘူး။ ကယ်တင်ရှင် မရှိဘူး။ 'အတ္တာဟိအတ္တနော နတ္ထော' မိမိကိုယ်မှတစ်ပါးကိုး ကွယ်ရာမရှိဘဲ။
လူ့ဘောင်လောကမှာ လောကီသားမှန်သမျှ အချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းနေကြတယ်။ ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီဆိုသလို အပြန်အလှန် အမှီသဟဲ ပြုနေကြတယ်။ အထီးထီး လူတွေနဲ့ အဆက်အဆံမရှိ ရပ်တည်လို့မရဘူး။ ဒါဟာ လူ့လောကရဲ့ သဘာဝတရား ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်အသက်ရှင် ရပ်တည်ရေးအတွက် ကိုယ့်ဘ၀ သာယာအေးချမ်းရေးအတွက် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရတယ်။ ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်ရှာစားရတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုကို ကိုယ့်ဟာ ကိုယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အားကိုးအားထားပြုလို့ မရဘူး။
ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားအားလုံးနဲ့ အတူတကွ လက်တွဲနေထိုင်ကြရတယ် ဆိုတဲ့ လောကသဘာဝတရားကို လူတွေက တလွဲဆံပင်ကောင်းလုပ်ပြီး မှီခိုအားကိုးမှု လွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်အောင် လုပ်နေကြတာ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နေရတယ်။ အခက် အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ့်နည်းနဲ့ကိုယ် ဖြေရှင်းဖို့ တိုက်တွန်းရမယ့်အစား၊ အားကိုးအားထားရှာဖို့ အကြံပေးတတ်ကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း သူ့အားနဲ့သူ ဖြေရှင်းဖို့ အကြံပေးလမ်းပြ လုပ်မယ့်အစား ကိုယ်က ကယ်တင်ရှင်လုပ်ပြီး ၀င်ကယ်ပေးကြတယ်။ စေတနာနဲ့ ၀င်ကယ်တာ ဆိုပေမယ့် ဒါဟာ ကူညီရာ မရောက်ပါဘူး။ တစ်ဖက်သားကို အားကိုးရှာလွန်းတဲ့ စိတ်ဓာတ် (Dependency Syndrome) အမြစ်တွယ်သွားပြီး တစ်သက်လုံး သူများ နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ အသက်ရှုတဲ့လူမျိုး ဖြစ်သွားစေပါတယ်။
အာဖရိကတိုက် အငတ်ဘေး ပပျောက်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး စတင်တည်ထောင်ပြီးကတည်း က ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ ယူအင်ဒီပီ၊ ယူနီဆက် စတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့တကွ သူဌေးနိုင်ငံကြီးတွေ အားလုံးက ဒေါ်လာတွေ ထရီလျံပေါင်းများစွာ သုံးပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ် ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ အာဖရိကတိုက်ကြီးကတော့ အငတ်ဘေးတွေ၊ ရောဂါဘယတွေ၊ မျိုးနွယ်စု လူသတ်ပွဲကြီးတွေ အောက်မှာ နစ်မွန်းသထက်နစ်မွန်းပြီး 'အမှောင်တိုက်ကြီး' (Black Continent) အဖြစ်ပဲ ရှိနေဆဲပါပဲ။ လွတ်လမ်းလည်း ရေးရေးတောင် မမြင်ရသေးပါဘူး။
'ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေး' အခြေအနေ ဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ 'ကယ်တင်ရှင်' စိတ်ဓာတ်(Savior Complex) တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ငတ်နေတဲ့လူတွေကို ငါးတွေပဲ ယူလာပေးနေတဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီလူတွေက ငါးလာပေးမှာ ကိုသာ အမြဲစောင့်မျှော်နေကြတော့တယ်။ တကယ်လုပ်သင့်တာက လှေတွေနဲ့ ပိုက်တွေပေးပြီး ငါးများတတ်အောင် လုပ်ပေးရမှာ မဟုတ်လား။ ကယ်တင်ရှင်စိတ်ဓာတ် လွန်ကဲနေတဲ့ ကယ်တင်ရှင်တွေက လူတွေကို မှီခိုလွန်းတဲ့ စိတ်ဓာတ် အမြစ်တွယ်သွားစေတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပညာရှင်အတော်များများကလည်း ကယ်တင်ရှင် လုပ်ရပ်တွေကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး။
'အလှူဒါနနဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုကို မကယ်တင်နိုင်' (Charity does not saveanation) ဆိုတဲ့ စကားကို ဖွံ့ဖြိုးရေးပညာရှင်တွေက ထောက်ပြလေ့ရှိတယ်။ လူတွေကို သူတို့ခြေထောက်ပေါ် သူတို့ရပ်ပြီး၊ သူတို့ဘ၀ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ကယ်တင်ဖို့ကိုသာ တိုက်တွန်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေကို 'ကယ်တင်ရှင်စိတ်ဓာတ်'တွေ ကူးစက်မလာစေချင်ဘူး။ အလားတူပဲ ကယ်တင်ရှင်မျှော်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေလည်း ရှိမလာစေချင်ဘူး။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောကြားတော် မူတဲ့အတိုင်း 'အတ္တာဟိအတ္တနော၊ နတ္ထော' စိတ်ဓာတ်မျိုးပဲ ထွန်းကားစေချင်တယ်။ ''ဘုရားတောင်မှ အမှီရှိမှ ပွင့်တယ်''ဆိုတဲ့ စကားကတော့ လူငယ်တွေကို ကယ်တင်ရှင်မျှော်တဲ့ စိတ်ဓာတ်သွင်းပေးတဲ့ သဘော သက် ရောက်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အစဉ်အလာ ဆိုရိုးစကားဖြစ်တိုင်း နှုတ်ထွက်မလွယ်သင့်ဘူး။ လက်လည်း မခံသင့်ဘူး။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အလိုတော်အတိုင်း ဘယ်ကိစ္စမဆို ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးမှ ဆုံး ဖြတ်သင့်ကြောင်း နှိုးဆော်လိုက်ချင်ပါတယ်။
Posted by A-bomb at 4:42 PM
ယခုမူကားငွေအိတ် ရှိသောသူသည်ယူစေ။ လွယ်အိတ်ရှိသော သူသည်ယူစေ။ ဓားမရှိသောသူသည် အဝတ်ကိုရောင်း၍ဓားကိုဝယ်စေ။ (လုကာ ၂၂:၃၆)
အကြမ်းဖက်သမားယေရှုက ဘယ်လောက်တောင်မှစစ်သွေးကြွနေလဲဆိုတာကြည့်ပါ။ သတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့အတွက် သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကို ဓားမဖြစ်မနေဝယ်ခိုင်းပါတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိရင်တောင်မှ အဝတ်ကိုချွတ်ရောင်းပြီးဝယ်ခိုင်းပါတယ်။ အရှက်အကြောက်လုံဖို့နဲ့ ရာသီဥတုဒဏ်ကာကွယ်ဖို့အတွက် အဝတ်အစားထက် ဓားကပိုအရေးကြီးပုံရပါတယ်။ အဲဒီဓားကိုဘယ်မှာသွားသုံးမလဲဆိုတာကြည့်ကြပါ။
မြေပေါ်သို့ငြိမ်သက်ခြင်းကို စေလွှတ်အံ့သောငှါ ငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်။ ငြိမ်သက်ခြင်းကို စေလွှတ် အံ့သောငှါ ငါလာသည်မဟုတ်။ ဓားကိုစေလွှတ်အံ့သောငှါ ငါလာသတည်း။ (မဿဲ ၁၀:၃၄)
ယေရှုဆင်းလာတာက ငြိမ်သက်ဖို့အတွက် ဒါမှမဟုတ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားပါတယ်။ ဓားကိုစေလွှတ်ဖို့အတွက်လာတာပါတဲ့။ အဲဒါမို့လို့လည်းခရစ်ရှန်များဟာ ယေရှုနာမတော်နဲ့ ခရစ်ရှန်စတိုင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကျူးလွန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုကိုဘုရားလုပ်ပြီး ကိုးကွယ်နေတဲ့ခရစ်ယာန်များဟာ အခုမှအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ယေရှုလက်ထက်မှာတင် ယေရှုရဲ့အချစ်ဆုံးတပည့်ရင်း ရှိမုန်ပေတရုဟာ အင်မတန်မှရုတ်ရင်း ကြမ်းတမ်းလှကြောင်း ကျမ်းစာမဟုတ်တဲ့ ကြမ်းစာမှာလာပါတယ်။
ထိုအခါ ရှိမုန်ပေတရုသည် မိမိ၌ပါသော ဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ ကျွန်တယောက် ကိုခုတ်သဖြင့် လက်ျာနားရွက်ပြတ်လေ၏။ ထိုကျွန်၏ အမည်ကား မာလခုဖြစ်သတည်း။ (ယောဟန် ၁၈:၁၀)
ခရစ်ရှန်များဟာ ဘယ်လောက်တောင်မှ သတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့လက်မနှေးဘူးဆိုတာကို တမန်တော်ပေတရုက သက်သေခံပါတယ်။ ခရစ်ရှန်များလက်ထဲမှာ လက်နက်ရှိပြီဆိုရင်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့ မယုံကြည်သူများအတွက်တော့ မတွေးဝံ့စရာအနာဂါတ်ပါပဲ။ ခရစ်ရှန်တွေနဲ့ ခရစ်ရှန်မဟုတ်သူတွေ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ဆိုတာ ခဲယဉ်းလှပါတယ်။
သမိုင်းမှာလည်း ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့တဲ့ ခရစ်ရှန်ကြီးဟစ်တလာဟာလည်း အနုမြူလက်နက်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာ လူတိုင်းအသိဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာ အနုမြူလက်နက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာအရိပ်လွှမ်းမိုးနေတဲ့ အစိုးရတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေကအများစုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ အမေရိကားက ခရစ်ရှန်ဖြစ်တဲ့ သမ္မတဟောင်းဘွတ်ရ်ှဟာလည်း အီရတ်နိုင်ငံကို စွမ်းအားမြင့် ဖျက်အားပြင်းလက်နက်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွဲခဲ့တာ ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပါ။ ဗုဒ္ဓဘုရားကတော့ စွမ်းအားမြင့်လက်နက်တွေတင်မကပါဘူး လက်နက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကိုပါ မပြုသင့်မပြုအပ်တဲ့ ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုပြီး ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေးရှုပြီး ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့ပါတယ်( အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ ၅၊ ၁၇၇-ဝဏိဇ္ဖာသုတ်)။ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးသန့်ဟာဆိုရင်လည်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရာထူးနဲ့ ပထမသက်တမ်းမှာပဲ ကျူးဘားကအနုမြူဒုံးကျည်တွေကို အောင်မြင်စွာဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျူးဘား ဒုံးပျံအရေးအခင်းဟာဆိုရင် အမေရိကန် နဲ့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံတို့ဟာ တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဆီကို ဦးတည်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ဦးသန့်ဟာ နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးလုံးကို ဖြောင်းဖြပြီး တတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်မယ့်ဘေးကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါပဲ။
ဘုရားအဆုံးအမအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း ငြိမ်းချမ်းမှာအသေအချာပါပဲ။ ဘာသာဝင်အရေအတွက်များတိုင်း၊ ဘာသာရေးအဆောက်အဦများတိုင်း သာသနာထွန်းကားတာမဟုတ်ပါဘူး။ သာသနာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပါယ်က အဆုံးအမလို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာသ၍ သာသနာထွန်းကားတာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိဘကမွေးလာလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာ၊ အာဏာသိမ်းလို့ အစိုးရဖြစ်လာပြီးနောက် ဘုရားအဆုံးအမနဲ့ဆန့်ကျင်စွာ အနုမြူလက်နက်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အစိုးရဟာ ဘယ်လောက်ပင် ဗုဒ္ဓမွေးဖွားရာအရပ်ကိုသွားရောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်မှန်ကြောင်း သရုပ်ဆောင်ပြနေပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစိုးရ ဘယ်သောအခါမှဖြစ်မလာပဲ ဘိုးတော်တွေကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်လိုက်နာသောကြောင့် ဘိုးတော်ဘာသာဝင်များသာဖြစ်ကြောင်း ပြောပါရစေခင်ဗျာ။
Posted by A-bomb at 2:26 AM
အယူမှားမိစ္ဆာဒိဌိ ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့၍ ဝါဒပေါင်းများစွာ၌ ကျင်လည်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင် သမ္မာဒိဌိဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်လာသော စာရေးဆရာ/ဒဿနပညာရှင် ဦးဆန်းလွင်ရေးသားပြုစုသော "ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လာသူ တစ်ယောက်အကြောင်း"စာအုပ် စာမျက်နှာ ၅၁-၅၂မှ ကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဖတ်ရှုခံစားတွေးတောနိုင်ကြပါစေ။
Posted by A-bomb at 8:35 AM
သို့ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် မုသာစကားကို ပြောတတ်သော စိတ်ဝိညာဉ်ကို မင်းကြီး၏ ပရောဖက်အပေါင်းတို့၌ သွင်းတော်မူပြီ။
(ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၁၈:၂၂) (ဓမ္မရာဇဝင် တတိယစောင် ၂၂:၂၃)
သင်တို့သည် သင်တို့၏အဘ တည်းဟူသော ယေဟောဝါမှဆင်းသက်ကြ၏။ သင်တို့အဘ၏ အလိုသို့လည်း လိုက်တတ်ကြ၏။ ယေဟောဝါသည် ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ လူအသက်ကိုသတ်သောသူဖြစ်၏။ သူ၌ သစ္စာတရားမရှိသောကြောင့် သစ္စာတရား ၌မတည်မနေ။ သူသည် မုသာစကား ပြောသောအခါ ကြားခံဝိဥာဉ်တော်အားဖြင့် ပြော၏။ မုသာစကား၌ ကျင်လည်သောသူဖြစ်၏။ မုသာ၏အဘလည်းဖြစ်၏။
Dhamma Guardian ရည်ရွယ်ချက်
ဗုဒ္ဓအယူဝါဒကို ပိုမိုလေးနက်စွာ နားလည်လာစေရန် ... ဓမ္မနှင့် အဓမ္မကို ကွဲပြားထင်ရှားစွာ သိကြစေရန် အလို့ငှာ Dhamma Guardian ဘလော့ကို ဖွင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဤနေရာတွင် အယူဝါဒဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များကို အချက်လက်ရှိရှိ အဆင့်တန်းရှိရှိ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်၊
ရန်အပေါင်းကို အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား
နှိုင်းယှဉ် ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း (6)
မှာချင်တာ မှာခဲ့ပါ၊ အဆင့်တန်းရှိရှိ ချေပလိုလျှင် ကွန်မန့်တွင်ရေးခဲ့ပါ
Downlod Myanmar Font
DHAMMA & ADHAMMA
Zay Tar Yar
Dhamma Guardian. Powered by Blogger - BlackSplat design by SamK.